Amaphoyisa athungatha intombazane ebonakala iqabulana nobenguthishanhloko waseReiger Park | News24
Amaphoyisa athungatha intombazane ebonakala iqabulana nobenguthishanhloko waseReiger Park
Johannesburg - Intombazane yesikole ebandakanyekayo emikhubeni yocansi eyayigilwa esikoleni samabanga aphezulu saseGauteng kungenzeka ukuthi yahamba kudala kulesi sikole, kusho amaphoyisa ngoLwesibili.
Isithombe sentombazane yesikole iqabulana nalowo obenguthishanhloko waseReiger Park NR 2 High School sibonakale sizungeza ezinkundleni zokuxhumana.
ULieutenant-Colonel Heila Niemand uthe abaseshi banezizathu zokukholelwa ekutheni lesi sithombe sathathwa eminyakeni emithathu eyedlule ngesikhathi le ntombazane yenza umatikuletsheni kulesi sikoleni.
UNiemand uthe amaphoyisa aphezu komsebenzi wokuthola ukuthi ngabe le ntombazane yayiphansi kweminyaka engu-18 ubudala na ngesikhathi kwenzeka lesi sigameko.
OLUNYE UDABA: Uthisha ubanjwe oqotsheni enza ucansi nomfundi
Uma kunjalo, lo thishanhloko, owesule emsebenzini emasontweni amabili edlule, uzobekwa amacala amaningi okubalwa kuwo nawokukhiqiza izithombe zocansi olubandakanya izingane.
Ngokombiko weTimesLIVE, lo thishanhloko wafaka incwadi yokwesula ngo-Okthoba ngonyaka odlule wabe eseshiya ngomhhlaka-15 Januwari, ngemuva kwezinsolo zokuputshuka kwama-video amtshengisa egila imikhuba yocansi nabafundi, othisha nabanye abasebenzi besikole.
"Awekho amacala asevuliwe okwamanje njengoba sisazama ukuthola izisulu," kusho uNiemand.
Kubikwa ukuthi abanye othisha ababandakanyeka kulolu daba baqinisekisile ukuthi bazivumela ngokwabo ukwenza imigilingwane yocansi nalo thishanhloko emagcekeni esikole.
Lo thishanhloko ubesesebenze kulesi sikoleni iminyaka engu-15.
UNgqongqoshe wezeMfundo eGauteng uPanyaza Lesufi uthe sekuxoshwe izikhulu ezintathu nothisha abathintekayo ezithombeni eziputshukile kanjalo nothishanhloko.
Fish Hoek 10:39 AM
Cape Town 10:38 AM